काठमाडौं । घटस्थापनाबाट नेपालीका घर आँगनमा दशैंले विधिवत प्रवेश गरीसकेको छ दशैको टिकाको दिनसम्म घर घरमा नवदुर्गाको पूजा आराधना हुने गरेको छ । तर, धेरैलाई नव दुर्गाको संस्कृत श्लोक सम्झना नहुन सक्छ । त्यसको अर्थ त झन् के थाहा होस् । त्यसैले नयाँ पुस्तालाई ज्ञान होस् भनेर यहाँ नवदेवीको स्तोत्र र त्यसको अर्थ प्रस्तुत गरिएको छ ः
यसको अर्थ :
‘ॐ चण्डिका देवीलाई नमस्कार छ । महर्षि मार्कण्डयजी भन्नुहुन्छ–जयन्ती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा र स्वधा, संसारमा यि नामहरुले प्रसिद्ध, हे माता जगदम्बे ! तिमीलाई मेरो नमस्कार छ । देवी चामुण्डे तिम्रो जय होस् ।
सम्पूर्ण प्राणिहरुको दुःख र पिडा हरण गर्ने भएकी देवी ! तिम्रो जय होस् । सबैमा व्याप्त रहने भएकी देवी ! तिम्रो जय होस् ।
महिषासुर दानवको नाश गरेर भक्तहरूलाई सूख दिने भएकी हे देवी ! तपाँईलाई नमस्कार छ । तपाँई मलाई रुप, जय र यश दिएर मेरा शत्रुको नास गर्नुहोस् ।
रक्तबीजको वध र चण्डमुण्डको विनास गर्ने भएकी देवी, तपाँईलाई नमस्कार छ । मलाई रुप दिनुहोस, जय दिनुहोस्, यस दिनुहोस् र शत्रुहरूको नाश गर्नुहोस् ।
शुम्भ र निशुम्भ तथा धुम्रलोचनको नाश गर्ने भएकी देवी ! तपाई मलाई रुप दिनुहोस्, जय दिनुहोस्, यश दिनुहोस् र मेरा शत्रुहरुको नाश गर्नुहोस् ।
वन्दनीय चरण भएकी, सबैलाई सौभाग्य दिने भएकी देवी ! रुप दिनुहोस्, जय दिनुहोस्, यश दिनुहोस् र शत्रुको नाश गर्नुहोस् ।
हे देवी ! तपाईंका रुप र चरित्रहरु अचिन्त्य छन् । तपाई सम्पूर्ण पापहरूको नाश गर्नु हुन्छ । मलाई रुप, जय र यश दिएर मेरा शत्रुहरूको विनाश गर्नुहोस् ।
पापहरूको नाश गर्ने भएकी हे चण्डिके ! भक्तीले विनित भएका प्राणीहरूको लागी रुप, जय र यश दिएर शत्रुहरूको नाश गर्नुहोस् । व्याधीको नाश गर्ने भएकी हे चण्डिके ! भक्ती पूर्वक तिम्रो अर्चना गर्नेहरूलाई रूप, जय र यश दिएर शत्रुहरूको नाश गर्नुहोस् ।’
(तस्बिर: प्रशिध्द पाथीभरा देवी ताप्लेजुंग)
२०७५ असोज २४ बुधबार ०५:४६:०० मा प्रकाशित
जीवन सम्पन्न हुने एउटा अचुक कारण
मानिसको एउटै मात्र समस्या छ, त्यो समस्या हो आत्मविश्वास गुम्नु । आत्मविश्वास गुमिसकेपछि मानिस यति गहिरो दलदलमा फस्छ कि उठ्न कठिनाइ हुन्छ । सबै
सुन्दर स्त्रीतिर मन जानुको कारण
एउटा प्रश्न प्राप्त भएको छ, ब्रह्मचर्य भनेको के हो ? ब्रह्मचर्यमा उपलब्ध नभईकन कुनै पनि मानिस बोधमा जान सक्दैन । ध्यानस्थ हुन सक्दैन । ध्यानको लागि
विपश्यनाबारे मसँग सामान्य अल्पज्ञान मात्र थियो । अनेक जुक्ति र कष्टकर तपस्या गरेर विभिन्न स्थानमा ज्ञानको खोजीमा भौँतारिँदा पनि गौतम बुद्धले जीवनको
\_' यत्ति पनि नबुझे देशमा दुर्घटना हुन्छ \_'
एउटा प्रश्न आएको छ– जीवनविज्ञानमा अध्यात्म, मनोविज्ञान र व्यवस्थापन तीनै चीजको विषयमा साधना गराइन्छ र जीवनविज्ञान यी तीनवटैको संगम हो भनिन्छ ।